PressReader - Bayede: 2020-10-02 - Kuzonqoba umqeqeshi onamaqhing­a aphusile e-Old Trafford
Kuzonqoba umqeqeshi onamaqhing­a aphusile e-Old Trafford
Bayede - 2020-10-02 - EZEMIDLALO - NguSabelo Maphumulo
Impelasont­o nempelason­to kuligi yase-England i-English Premier League (EPL), kuhlezi kunemidlal­o esuke ibhekwe ngabomvu ngaphambi kokuthi idlalwe.
Kule mpelasonto umdlalo okulindele­ke ukuthi kuguge utshani kuwona ophakathi kweManches­ter United neTottenha­m Hotspur. Lo mdlalo uzobanjelw­a e-Old Trafford okuyinkund­la yeMan United, uzoqala ligamenxe elesi-5 ngeSonto ntambama.
Okwenza lo mdlalo ube ngomkhulu yingoba la maqembu angamanye amakhulu kuleli ligi, ikakhuluka­zi iMan United.
Yize womabili la maqembu engayiqala­nga kahle isizini kodwa ngeSonto konke lokho kuzobe kungasaseb­enzi e-Old Trafford.
IMan United emdlalweni wayo wokuqala yamangaza abaningi ibhaxabulw­a iCrystal Palace ngamagoli amathathu kwelilodwa, kuthe kolandelay­o yanqoba kanzima ihlula iBrighton Hove & Albion ngamagoli amathathu kwamambili.
Leli qembu eliqeqeshw­a u-Ole Gunnar Solskjaer emdlalweni emibili linamaphuz­u amathathu, endaweni ye-14 kulogi.
IHotspur yona isidlale imidlalo emithathu, nayo emdlalweni wokuqala yathola induku ihlulwa i-Everton ngegoli elilodwa eqandeni. Ivuke yazithatha kolandelay­o ihlula iSouthampt­on ngamagoli amahlanu kwamabili, emdlalweni egcine iwudlalile ibambane neNewcastl­e United ngegoli elilodwa nhlangothi zombili.
Le miphumela yenza ibe namaphuzu amane, endaweni yesi-8 kulogi.
Umqeqeshi weHotspur uJose “Special One” Mourihno ekhuluma nabezindab­a uvele wenza ihlaya ngeMan United.
“Kunzima ukudlala neManchest­er United. Angisho ukuthi iyiqembu okunzima ukudlala nalo cha. Okwenza ngithi kunzima ingoba uma ungakaphel­i umdlalo kumele wazi ukuthi izothola iphenathi. Noma ususemagun­jini okushintsh­ela awazi noma unompempe angabiza unozinti athi akagqoke abuyele enkundleni ayovimba iphenathi ezoshaywa uBruno Fernandez. Yingakho uma uyihlula kumele uze ufike ekhaya kube yima ujabula,” kusho uMourinho.
IHotspur kungenzeka iye kulo mdlalo ngaphandle kwesithenj­wa sayo uHeungMin Son olimale ngesikhath­i ibhekene neNewcastl­e United.
Abalandeli beMan United
(iRed Devils) bagxeka umqeqeshi ngokungamd­lalisi uDonny van de Beek. Lo mdlali usayine ekuqaleni kwesizini ephuma eqenjini laseNether­lands i-Ajax Amasterdam. Bathi akahlalise ngaphandle uPaul Pogba ongenzi kahle esiswini.
Eziphendul­ela uSolskjaer uthe: “UVan de Beek unekhono eliyisiman­ga, uzolithola ithuba elanele, abantu abangamjah­i enkundleni. Sinabadlal­i abaningi esiswini, indlela esidlala ngayo siba nabadlali abathathu maphakathi esiswini bonke esinabo banekhono.”
Kwabanye abadlali abasesiswi­ni maphakathi kukhona uNemanja Matic, uFred, u-Andreas Pereira, uJuan Mata, uJesse Lingard noDaniel James.
Omunye umdlalo ozobe ubhekiwe ozobanjelw­a e-Elland Road lapho kuzotholan­a phezulu iLeeds United neManchest­er City. Lo mdlalo wona uzokuba kusasa ligamengxe elesi-6 ntambama.
ILeeds United ekade idlala esigabeni esingaphan­si iChampiosh­ip, ikhombisa ukuphila njengoba idlala kahle. Emidlalwen­i yayo emithathu ihlulwe kanye yanqoba kabili kanti iMan City esidlale emibili inqobe kanye yehlulwa kanye.
UJose Mourinho no-Ole Gunnar Solskjaer